တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်က ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည့် အန်သိုနီအယ်လ်ဘာနိစ်အား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု - Xinhua News Agency
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၂ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် အန်သိုနီအယ်လ်ဘာနိစ်အား မေ ၂၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ မေ ၂၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်က ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသည့် အန်သိုနီအယ်လ်ဘာနိစ်အား မေ ၂၃ ရက်တွင် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဝန်ကြီးချုပ်လီက တရုတ်-ဩစတြေးလျဆက်ဆံရေး အားထားယုံကြည်လောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပြည်သူများ၏ အခြေခံအကျိုးစီးပွား နှင့် ဘုံရည်မှန်းချက်ဖြင့် ကိုက်ညီကြောင်း နှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် ချမ်းသာဝပြောရေးအား အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း သဝဏ်လွှာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဩစတြေးလျအလုပ်သမားပါတီသည် တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရာတွင် မှန်ကန်သည့်ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အရေးကြီးသောပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်နေကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်သည် တရုတ်-ဩစတြေးလျ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်မှု နှစ် ၅၀ ပြည့် နှစ်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုကာ ဝန်ကြီးချုပ်လီက တရုတ်ဘက်ခြမ်းက ဩစတြေးလျဘက်ခြမ်းနှင့်အတူ အတိတ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၊အနာဂတ်ကို မျှော်ကြည့်ခြင်း နှင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှု ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိသည့် အခြေခံသဘောတရားအား ထိန်းသိမ်းကာ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး၏ အားထားယုံကြည်လောက်ပြီး တည်ငြိမ်သော တိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Chinese premier congratulates Albanese on assumption of office as Australian PM
BEIJING, May 23 (Xinhua) — Chinese Premier Li Keqiang on Monday sentacongratulatory message to Anthony Albanese on his assumption of office as prime minister of the federal government of Australia.
In his message, Li said the sound and stable development of China-Australia relations conforms to the fundamental interests and common aspirations of their people and is also conducive to peace, stability, development and prosperity in the Asia-Pacific region.
In the 1970s, the Australian Labor Party made the correct choice in establishing diplomatic ties with China, making important contributions to the development of bilateral relations, Li added.
Noting that this year marks the 50th anniversary of the establishment of China-Australia diplomatic ties, Li said the Chinese side is ready to work with the Australian side to review the past, look into the future, and uphold the principle of mutual respect and mutual benefit, so as to promote the sound and steady growth of their comprehensive strategic partnership.■
Photo – Anthony Albanese reacts after winning Australia’s 2022 federal election in Sydney, Australia, May 21, 2022. (Xinhua/Bai Xuefei)